काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानको रक्षा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको स्प’ष्ट पारेका छन् ।
आइतबार पार्टी कार्यालय पे’रिसडाँडामा आयोजित ५६औं अन्तर्रा’ष्ट्रिय जा’तिभेद उन्मु’लन दिवस (२१ मार्च) र नेपाली दलित आन्दोलनको कार्यदिशा विषयक अन्त’रक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
￼उनले आदि’वासी, जन’जाति, दलि’तहरुको अधि’कार द’मन गर्नेहरुको ‘सक्रि’यता बढेको टिप्प’णी गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले यु’द्धको बेलामा सबैभन्दा बढि सम्मानित नै दलितहरु रहेको स्म’रण गराए ।
उनले माओवादी आ’न्दोलनले स्थापित गरेको संविधानलाई हिजोका गण’तन्त्रवि’रोधी, सामन्त’वादका द’लालले मा’स्न खोजेको टिप्प’णी गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशीको अगाडि सजिलै राम्रै ल’म्पसार पर्नसक्ने नेता भएको टि’प्पणी गरे । उनले भने,‘२०औं, २५औं वर्षदेखि विदेशीहरुले हु’र्काएको, पालित, पो’षित पनि को हो ? भनेर हेर्दा जाँदा सबैले (विचार गर्नुहोला) केपी ओली नै देखियो भन्या छन्,
र अहिले केपीलाई प्रतिनिधिको रुपमा, त्यो धारको, प्रति’गामी, प्रति’क्रा’न्तिकारी, ग’णतन्त्रवि’रोधी, समावेशीवि’रोधी, सारमा लोक’तान्त्रिक गण’तन्त्रलाई ना’स गर्नसक्ने पात्रको रुपमा उनीहरुले केपीलाई लिएका छन् । कति दिन लिन्छन् मलाई थाहा छैन् ? अहिले चाहीँ लिएकै छन् ।
र, अर्को धारको प्रतिनि’धित्व को हुन भयो त भन्दा हामी, माओवादी विद्रो’ह गरेको, सबैको अधिकारको लागि ल’डाई लड्ने, अब सबै नेपाली जनताले फैसला गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तपाई कुन पक्षतिर उभिने भनेर सबैले जवाफ दिनुपर्नेछ ।-रिपोर्टस क्लब बाट
२०७७ चैत्र ९, सोमबार २०:१४ गते 1 Minute 579 Views